Al Shabaab oo 10 qarax ka fuliyay degmooyin katirsan gobolka Banaadir.
Maleeshiyaadka Suufida oo wada abaabul ka dhan maamulka 'Galmudug' iyo xiisad Dhuusamareeb ka jirta.
Askari katirsan AMISOM oo ku dhintay Qarax ka dhacay Sh/dhexe.
Xildhibaannada labada aqal oo meel mariyay Heshiiskii doorashooyinka.
Daawo Video: Meydad dad ay Xasuuqeen ciidanka Kenya oo gobolka Gedo laga helay.
Dagaal ooge Ruugcaddaa ah oo madaxweyne ka noqday ismaamulka Gobolka Tigray ee dalka Itoobiya [Warbixin].
Wax ka ogoow Madaxweynihii ugu horreeyay Kenya iyo sedbursiga Kikuuya W/Q: Wadaadyare
Thursday July 23, 2020 - 11:11:19 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Silsilado qaraxyo ah ayaa markale lagu weeraray saldhigyo ay caasimadda Soomaaliya uga sugnaayeen ciidamo katirsan dowladda.
Dhwor qarax ayaa xalay gilgilay xaafado katirsan magaalada Muqdisho waxaana lala beegsaday fariisimo maleeshiyaadka dowladda Federaalka ay ku leeyihiin degmooyin katirsan gobolka Banaadir.
ilo wareedyo ayaa sheegaya in illaa Afar askari oo katirsan ciidamada booliska ay ku dhaawacmeen qaraxyadan oo dhawaqooda si aad ah looga maqlayay xaafado katirsan caasimadda.
Qaraxa koowaad ayaa ka dhacay xalay degmada howlwadaag gaar ahaan saldhiga degmadaasi waxaana ku dhaawacmay 1 Askari oo boolis ah, qaraxa labaad wuxuu ka dhacay isla degmada holwadaag gaar ahaan meel u dhow xarunta Daalo halkaasi oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaad katirsan dowladda balse lamasoo sheegin khasaara ka dhashay..
Sidoo kale qarax ayaa ka dhacay degmada wardhiigley gaar ahaan xaafada Maxamuud Xarbi waxaana lala eegtay maleeshiyaad halkaasi ku sugnaa, qaraxa afraad wuxuu ka dhacay isla degmada Wardhiigley gaar ahaan Laanta barwaaqo ee furayaasha waxaana lala beegsaday maleeshiyaad ku sugnaa xaafadaasi .
Weeraradii xalay oo ahaa kuwa isku tixan loona adeegsaday Bambaanooyinka gacmaha laga tuuro meelaha kale ee ay ka dhaceen waxaa kamid ahaa isgoyska degmada howlwadagaag waxaana lagu weeraray maleeshiyaad halkaasi ku sugnaa.
Wararka ayaa intaas ku daraya in weeraro loo adeegsaday bambaanooyin lagu qaaday saldhigyo kuyaalla degmooyinka Kaaraan, Dayniile iyo Yaaqshiid waxaana ka dhashay khasaara ubadan dhaawacyo oo soo gaaray ciidamada booliska dowladda.
Ciidamada Kenya oo xasuuq iyo qafaal ka geystay deegaan katirsan gobolka Gedo.
Mas'uuliyiin katirsan Dowladda Suudaan oo Saraakiil Yahuud ah kula kulmay dalka Imaaraatka Carabta.
Al Shabaab oo sheegtay Mas'uuliyadda Weeraro Askar Kenyaan ah lagu dilay.
Dagaal lagu dilay ciidamo katirsan Galmudug oo ka dhacay Galguduud.
Xoogagga Al Shabaab oo Weeraro Safballaaran ah ku qaadday Saldhigga ciidanka Kenya ee Qooqaani.
Al Shabaab oo sheegatay Mas'uuliyadda Weerar lagu dilay Xildhibaan oo ka dhacay Jowhar.